Mercato: PSG: Barça waa ay ka yaabsatay "Cristiano Ronaldo cusub" - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE • SPORTS Mercato: PSG: Barça waa ay ka yaabsatay "Cristiano Ronaldo cusub"?
Mercato: PSG: Barça waa ay ka yaabsatay "Cristiano Ronaldo cusub"
Posted on 13 April 2019 at 7h15 by Th.B.
FC Barcelona ayaa hoos udhigi doonta Joao Felix inta lagu guda jiro falanqeynta Luka Jovic khamiistii garoonka Benfica Lisbon ee Eintracht Frankfurt, waxaana laga yaabaa inay joojiso qorshaha Paris Saint-Germain.
Manchester City, United, ka Juventus, ka Borussia Dortmund, ka Real Madrid, ka Paris Saint-Germain... dhamaantood waxay leeyihiin aragtiyo Joao Felix, calaamadda sannadka 19 Benfica Lisbon, waxaa loo yaqaan 'Cristiano Ronaldo cusub'. Xilli ciyaareedkan, khadka dhexe ee weerarka ayaa goolal ka dhaliyay 10 ee Nos Liga, waxaana uu seddex gool u dhaliyay Europa League. Felix wuxuu helay shabakadda shabakadda C3 saddex jeer Khamiistii Benfica - Eintracht Frankfurt Habeenka Khamiista (4-2). Waxqabadka aan ka tegeynin maqnaashaha FC Barcelona.
Dhaqdhaqaaqa waxqabadka Joao Felix, Barca waxa ay u maleyneysaa inay faragelineyso tartanka saxiixiisa
Sida laga soo xigtay xogta cayaaraha , ka FC Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay u direen wafdi ka socda hoggaamiyeyaasha in Estadio de la Luz Khamiistii si ay u kormeeraan Luka Jovicin maamulaha Barcelona uu jeclaan lahaa in uu qoro qaabka uu u socdoLuis Suarez. Xulka seddexda dhibcood ee uu ku dhaliyey dhibcaha reer Portugal ayaa raadinayay rikoor xoogan oo ku aadan daafaca reer Catalan. Ka dib markii uu maqnaa fursad uu ku saxiixo Cristiano Ronaldo xilligaas ayuu naftiisa u galay Manchester United in 2003, ka Barca sidaas darteed bilaabi kara dhaqdhaqaaqyada waaweyn xagaaga si ay u soo xiraan adeegyadiisa. Gaar ahaan tan iyo markii Real Madrid ay ka soo bixi laheyd rikoorka ...
CAN 2019: xaflad weyn oo barbaro ah
PSG: Waaliddiinteygii hore ee PSG ayaa ku farxi lahaa